Labyrinth für kider - Weihnachten - Kostenlose Ausmalbilder
Labyrinth für kider – Weihnachten
Inona no lalana mankany amin'ny tanjona? Tadiavo amin'ny alàlan'ny rantsantanana na penina ny dianao. Tandremo anefa fa ny lalana dia mety hitarika any amin'ny làlan-kizorana haingana. Maze sy labyrint ho an'ny ankizy dia manazatra ny fahaizan'ny moto sy ny fahaizana mifantoka ary mampihatra ny fomba fitantanana pensilihazo mifantoka amin'ny lalao.
Labyrinth – Der Weg zum Weihnachtsbaum
Maze sy labyrint ho an'ny ankizy dia manazatra ny fahaizan'ny moto sy ny fahaizana mifantoka ary mampihatra ny fikirakirana penina be loatra. Amin'ny fipihana ny sary dia misokatra amin'ny endrika PDF ny labyrint:
Labyrinth maze ho an'ny ankizy